Pipe Fittings, Ductile Iron Manhole Covers, Kandira Iron Cookware -HONGGUANG
Chigadzirwa chinofukidza akasiyana zvigadzirwa, zvinosanganisira kutaurirana, simba, pombi ouinjiniya, nhandare uye matunhu maguta zvivakwa zvinoshandiswa nodular kukanda simbi shaft butiro, kabati, pombi fittings, mota zvishongedzo, michina zvishongedzo, zvekurima michini zvishongedzo, kukanda simbi vabiki, zvipfuyo zvishongedzo uye mamwe manomwe makuru akateedzana, anopfuura marudzi gumi nemashanu.Ona Zvimwe
Kanda Iron Cookware
/ cast-iron-chiteshi-kugutsikana /
Hongguang Handan Cast Foundry Co., Ltd. yakavambwa muna 1998. Iyo iri muJize County Foundry Industrial Park, Ruvimbo rweHebei, inofukidza nzvimbo inopfuura 200 mu (130,000㎡), vashandi vese mazana mana nemakumi mashanu nevashandi. capactiy inogona kusvika makumi matatu, makumi matatu ematani uye parizvino vhoriyamu yekugadzira yegore ingangoita zviuru makumi maviri nezvina. Midziyo mikuru yekambani: mitsara miviri yekumira yekumisa; a zvakakwana otomatiki yakatwasuka kuumba static kumanikidza mutsetse; Resin jecha yekugadzira mutsara; marasha upfu jecha yekugadzira mutsara; yepakati frequency induction kupisa kuchengetedza moto 4, yakachena okisijeni mwenje rotary chirafu 2; intrusive mhepo-kuomesa dipping mutsetse, kupuruzira mutsetse, goko chinoumba muchina, bara nenyunje muchina uye zvichingodaro.
Nhoroondo Yedu ISO Kuedza Zvishandiso Vatengesi Vakuru
Iyo yakanyoreswa capital yakashandurwa ikava mamirioni makumi mashanu euan. Iyo kambani yakazvimiririra yakatsvagurudza uye ndokuvandudza kudzikamisa okisijeni kupisa moto muhombe yekugadzirisa kusvibiswa kwezvakatipoteredza kunokonzerwa nekunyunguduka kwekombi.
Iyo kambani yakapasa BSI system uye chigadzirwa chitupa, kuburikidza ne ISO14001: 2004 kwezvakatipoteredza manejimendi system chitupa, OHSAS18001 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi sisitimu setifiketi;
Iyo huru yekuyedza michina: kemikari element yekuongorora chiridzwa, spectrometer, metallographic maikorosikopu, choto nekukurumidza analyzer, yepasirese yekuyedza muchina, Brinell kuomarara tester, kuumba jecha rabhoritari, yedhijitari kuratidza cap yekumanikidza tester, pombi hydraulic murabhoritari, nezvimwe.
Izvo zvigadzirwa zvinotengeswa mushe muBritain, Germany, Itari, Southeast Asia, Middle East, Africa nedzimwe nyika nematunhu, uye ndivo vanonyanya kupa makambani emakambani makuru ekuvaka munyika. Zvigadzirwa zveAvision ndezvemhando yepamusoro uye Avision brand inozivikanwa muEurope.